टोकियोले मिलाउला त अमेरिका-इरान विवाद ? – Nepal Japan
नेपाली समय : 11:25:17
जापानी समय : 02:40:17
टोकियोले मिलाउला त अमेरिका-इरान विवाद ?
7 June, 2019 14:33 | जापान | comments | 48750 Views
तेहरानसँगको आफ्नो सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै जापानले अमेरिका–इरानबीचको तनाव कम गर्न मध्यस्थता गर्न
जापानी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले मध्यजुनमा इरान भ्रमण गर्न सक्छन् । इरान र अमेरिकाबीचको मध्यस्थता गरिदिने आबेको प्रस्तावमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सकारात्मक देखिएका छन् ।
उनले आबेको निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् । सन् १९७८ मा टोकियो फुकुदापछि कुनै पनि बहालवाला जापानी प्रधानमन्त्री इरान भ्रमणमा गएका छैनन् । यस्तोमा आबेले इरान भ्रमण गर्नुपछाडिको कारण के हो ? यसको प्रभाव कस्तो रहन सक्छ ? यी विषय अहिले बहसमा छन् । टोकियो र वासिंटन परम्परागत सहयोगी हुन् र उनीहरूको कूटनीति, सैन्य र सुरक्षा स्वार्थ जोडिएको छ । मध्यपूर्वी देशसँग पनि जापानको सम्बन्ध राम्रो छ । त्यसमध्ये इरान पनि एक हो ।
जापानमा प्राकृतिक स्रोतको आफ्नै सीमितता छ । तर, विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानलाई विकासका लागि धेरै ऊर्जा आवश्यक पर्छ । उसले ग्यास र तेल आयात गर्ने गरेको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ । जापानको मध्यपूर्वी कूटनीति ऊर्जाको कूटनीति हो । जापानमा धेरै ऊर्जा आयात गर्ने देशमध्ये इरान पनि एक हो । चर्चित सञ्चार माध्यम द डिप्लोमेटका अनुसार सन् २०१७ मा टोकियोमा तेलको कच्चापदार्थ आयात गर्ने देशको सूचीमा इरान छैटौँ स्थानमा थियो ।
त्यसैले इरानमा जापानको आफ्नै स्वार्थ छ । जापानमा ऊर्जाको उच्च माग छ र पर्सियन खाडी देशबाट त्यसको पूर्ति हुने गरेको छ । त्यसैले यी देशमा हुने राजनीतिमा वासिंटनको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि टोकियोको स्वार्थ फरक छ । ऊर्जा खानी इरानसँग आर्थिक रूपमा निर्भर भएकाले जापानले सीधै द्वन्द्व गर्न सक्ने अवस्था छैन ।पछिल्ला वर्षमा जापानले पनि आफूलाई विश्वशक्तिका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । आफ्नो आर्थिक प्रभावको अधिकतम उपयोग गर्ने उसको नीति छ ।
आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गरेर जापान विश्वलाई आफ्नो आवाज ठूलो स्वरमा सुनाउन चाहन्छ भन्ने अमेरिका–इरानबीच मध्यस्थता प्रयासले देखाएको छ
जापानले पूर्वी एसियामै मात्र आफूलाई सीमित राख्न चाहेको छैन । ऊ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि प्रभाव फैलाउन चाहन्छ । इरान र अमेरिकाबीचको विवादमा मध्यस्थता गर्ने उसको चाहना यसको प्रमाण हो । जापानले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न चाहिरहेको छ र विश्वलाई आफ्नो आवाज ठूलो स्वरमा सुनाउन चाहन्छ भन्ने यसले देखाएको छ । यसका लागि जापानले आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो ऊर्जाको मागलाई सम्बोधन गरेर अमेरिकासँग पनि स्थिर सम्बन्ध कायम राखिरहनुपर्ने चुनौती छ । ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि नाकाबन्दी लगाएर विवादलाई उच्च बिन्दुमा पु-याएको छ । आणविक विवादसँगै इरानको इस्लामिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीले पनि अमेरिकासँग विवाद बढ्नुमा सघाएको छ । यद्यपि ट्रम्पले २७ मेमा तेहरानको शासनसत्ता परिवर्तन गर्ने आफ्नो ध्येय नरहेको दाबी गरेका छन् ।
अमेरिका र इरानको तनाव बढिरहेका वेला आबेको भ्रमणले अमेरिका र इरान दुवैसँग जापानको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन भूमिका खेल्छ । तेहरानसँगको आफ्नो सम्बन्धको फाइदा उठाएर आबेले दुई देशबीचको तनाव कम गर्न मध्यस्थता पनि गर्न सक्छन् । उनले वासिंटनको धारणा र सन्देश तेहरानलाई सुनाउनेछन् । हेर्न बाँकी नै छ जापान कत्तिको राम्रो मध्यस्थकर्ता हुन सक्छ ।
(लेखक चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजअन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ जापानिज स्टडिजका निर्देशक हुन्)ग्लोबल टाइम्सबाट
साभार -नयाँ पत्रिका